Loza mialoha ho an'ny mpandeha an-tongotra any New York
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Loza mialoha ho an'ny mpandeha an-tongotra any New York
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Fiantsenana bisikileta tsy ara-dalàna eny amin'ny sisin-dalan'i New York
Tamin'ny taona 2017 dia nisy dian-bisikileta mihoatra ny 450,000 170,000 isan'andro tany New York City, tafakatra 2005 tamin'ny taona XNUMX. Raha ny fitomboan'ny isan'ny mpitaingina bisikileta eny amin'ny araben'i Manhattan dia manome PR tsara ho an'ny Ben'ny tanàna, ny kolontsaina bisikileta mitombo dia mampahatezitra ireo mpandeha an-tongotra, mitanisa ireo bisikileta mandeha haingana , mampandeha jiro mena, miantsoantso teny efatra taratasy, mandefa hafatra amin'ny bisikilety, manohitra ny fifamoivoizana, ary mandondona ireo be antitra miaraka amin'ny mpandeha an-tongotra sy tehina. Ho fanampin'izany, ny lalan'ny bisikileta sy ny gara miantsena an'i Citi Bike, ampiarahina amin'ny fijanonan'ny bisikilety eny an-dalana izay manalalaka toerana amin'ny mpandeha an-tongotra, ny fandehanana amin'ny sisin-dalan'i New York dia nanjary nofy ratsy sy fanamby ihany koa.
Tsy tranga vaovao ny bisikileta New York. Ny lalan'ny bisikileta voalohany tany Amerika dia nisokatra tany Brooklyn (1894). Maherin'ny 500,000 ireo New Yorkers olon-dehibe mampiasa bisikileta mihoatra ny indroa isam-bolana, ho an'ny fanatanjahan-tena sy fitaterana.
Mandeha any Manhattan? Mitandrema!
Noho ny fitomboan'ny isan'ny bisikileta dia mety hanimba ny fahasalamanao ny fandehanana amin'ny arabe amin'ny tanànan'i New York. Tany Manhattan, tamin'ny 2017 dia nisy lozam-pifamoivoizana 207 teo anelanelan'ny bisikileta sy ny mpandeha an-tongotra, ary nahatratra 172 ny naratra an-tongotra. Tamin'ny taona 2018, 155 ny lozam-pifamoivoizana teo amin'ny mpandeha an-tongotra sy ny mpitaingina bisikileta, izay nahatratrarana 134 ny mpandeha an-tongotra.
Ny faritra mampidi-doza indrindra dia misy: ny faritany faha-13 an'i Flatiron / Gramercy Park; Chinatown / Little Italia ary Lower Manhattan miampy ny West West Side. Mampidi-doza ny fahasalamanao ihany koa ny Central Park, satria ny mpitaingina môtô mihazakazaka mamaky jiro mena mametraka loza mety hitranga amin'ireo mpandeha an-tongotra noho ny faniriany hiampita arabe fotsiny.
Araka ny Brad Hamilton (NY Post, 31 Aogositra 2019), NYPD dia namoaka fanitsakitsahana miisa 19,949 tamin'ireo mpitaingina bisikileta tamin'ny taona 2019, raha oharina amin'ny 18,148 tao anatin'ny vanim-potoana io ihany tamin'ny 2018.
Tsy diso fihetsika ireo mpandeha an-tongotra
Marina izany ary tsy maintsy eken'ny tompon'andraikitra voafidy ao New York fa tandindomin-doza ny mpandeha an-tongotra. Na olona maratra na olona 2 dia tsy misy ratra azo ekena amin'ny maha-tanàna manana loharanon-karena tsy hita isa.
Ny tanàna dia mety ho tsara kokoa ary hanao tsara kokoa. Ny Ben'ny tanàna ary koa ny lehilahy sy vehivavy voafidy amin'ny tanana, federaly ary federaly dia manana ny loharanon-karena hahatonga ny sisin-dalan'i New York ho azo antoka kokoa. Tsy tokony hampidi-doza raha mandeha an-tongotra ny olona. Jared Evans (mpandalina ara-politika jiosy Voice) dia nanontany tena momba ny tsy fahalianan'ny Ben'ny tanàna de Blasio tamin'ity fahitana azy ity, "… manodina ny mason'ireo mpitaingina bisikileta tsy mitongilana… inona ny olana lehibe raha ny mpitaingina bisikileta sasany no mamono olona ary mamono mpandeha an-tongotra."
Na ny mponina na ny mpizahatany dia miara-mandeha amin'ny sakaizany sy ny fianakaviany, mandeha amin'ny alika, milalao amin'ny zanany, miolakolaka miadana amin'ny tehina na mpandeha an-tongotra, na manandrana manamboatra ny bontsongo, torotoro na sisin-dàlana tapaka miaraka amin'ireo sezany misy kodiarana, ny sisin-dàlana ao an-tanàna dia tokony ho toerana azo antoka.
Araka ny voalazan'i Jonathan Adkins, talen'ny Executive Executive Association an'ny fiarovana ny làlambe (GHSA), “Mbola maneno hatrany ny lakolosy fanairana momba an'io olana io. Mazava fa mila manamafy ny ezaka ataontsika hiarovana ny mpandeha an-tongotra…. ”
Raha ny tompona trano fisakafoanana dia takiana mba hahazo fahazoan-dàlana avy amin'ny tanàna hanitarana ny safidiny eo amin'ny sisin-dalan'i New York, hita fa tsy miitatra amin'ireo tompona trano fisakafoanana misahana ny arabe amoron-dalambe misy bisikileta - manana bisikileta. Betsaka tokoa amin'ireo bisikileta ireo no mihazakazaka misimisy kokoa amin'ny sidewalk mihoatra ny taloha, mamela ny mpandeha an-tongotra handeha hitety ny sakana, matetika amin'ny loza mety hitranga.
Tsy misy lalàna ny bisikileta
Ny olona amin'ny bisikileta dia mino fa tsy mila mankatoa lalàna, ary ny zon'izy ireo dia manolo ny zon'ny mpandeha an-tongotra. Tsy marina io finoana io. Ny lalàna dia mitaky ny fandehanan'ny mpandeha bisikileta miaraka amin'ny fifamoivoizana satria ny bisikileta manohitra ny fifamoivoizana no antony lehibe mahatonga ny lozam-pifamoivoizana. Ny mitaingina fifamoivoizana dia mahatonga ny bisikileta ho hita kokoa sy ho fantatra mialoha ny fihetsik'izy ireo.
Ireo mpitaingina bisikileta dia tsy maintsy mankatoa ny jiro sy ny takelaka fifamoivoizana rehetra ary tsy maintsy manondro fihodinana na mandeha amin'ny làlan'ny bisikileta na làlana na lalana iraisana iraisan'ny mpandeha an-tongotra.
Ny lalàna dia mitaky ihany koa ny fampiasàn'ny mpitondra bisikileta amin'ny lalana voatondro amin'ny fomba fitaterany. Ho fanampin'izany, ny bisikileta dia tsy mahazo mandray an-tanana ny sisin-dàlana. Ny fizarana «b» (Fizarana 19-176) ao amin'ny kaody fitantanan-draharaha ao an-tanàna dia manefa sazy sivily $ 100 ambony indrindra amin'ny bisikileta amoron-dalana. Ny fizarazaran-tany "c" dia manonona fiovan'ny asa ratsy rehefa misy olona mandeha bisikileta amin'ny sisin-dàlana amin'ny "fomba izay mampidi-doza olona na fananana hafa", ary izany dia mety hanefa sazy 20 andro an-tranomaizina. Rehefa mitaingina amoron-dalana (toerana natokana ho an'ny mpandeha an-tongotra) ny bisikiletan'ny bisikileta dia tsy maintsy hisy ny fifanolanana, ao anatin'izany ny fianjerana… satria vato misakana tsy ampoizina eo amin'ilay lalana izy ireo. Takiana ihany koa fa ny mpitondra bisikileta, toy ny mpitondra moto, dia manome zon'ny mpandeha an-tongotra.
Raha ny filazan'i Eben Weis, “… raha tratran'ireo mpandeha bisikileta amoron-dalana tsy manam-paharoa ny tanànanao dia tsy midika izany fa ratsy ny bisikileta. Midika izany fa ny tanànanao moto tanteraka ny fotodrafitrasa bisikileta. Izay no tena olana ”
“Isika rehetra izay monina na miasa any New York City dia manao izany amin'ny loza satria misy mpitaingina bisikileta mandehandeha mamakivaky ny arabe ary matetika manohitra ny fifamoivoizana amin'ny arabe tokana. Ny bisikileta dia tokony hanana takelaka ahazoana mandray andraikitra amin'ireo mpitaingina fiara… ”Ward Landrigan, CEO Verduna.
Ny orinasa dia tokony ho fantatra amin'ny bisikileta amin'ny anarany sy ny nomeraony.
Aza manidy ny bisikiletinao amin'ny hazo !!! Tsy ara-dalàna ary manimba ireo hazo vitsivitsy ananantsika.
Tsy maintsy manana takelaka ahazoana mijanona eny amin'ny arabe ho an'ny besinimaro ianao.
Raha tsy manana lovia ny bisikiletanao dia mety ho voatarika! indrindra raha tsy hita ny VIN.
Tsy ara-dalàna ny fijanonana amoron-dalana.
Halaviro ny faritra an-tongotra rehetra izay manakana ny fivezivezena an-tongotra.